Posted by သက်ဝေ at 4:42 PM
myatnoe September 17, 2008 at 6:08 PM
after i read I feel very sad .
I recognized my family . They told like this. but i have not such kind of letter.
sonata-cantata September 17, 2008 at 10:37 PM
(ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့မှမပြည့်စုံနိုင်မှန်း သိရက်နဲ့ မိဘမေတ္တာကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်တာပါ။)
Moe Cho Thinn September 18, 2008 at 12:23 AM
ဒါ အမေ ပါပဲ။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ချိုသင်းအမေဆိုလဲ ဒီလိုပြောနေမှာလား ဆိုပြီး မရှိတော့တဲ့ အမေကို သတိရလိုက်တာ။
အမေ အကြောင်းရေးဖို့ဆိုရင် ခံစားရလွန်းလို့ အမြဲ ရှောင်ခဲ့တာ။
အဲဒီ မမ သူငယ်ချင်း ညီအမလေး နှစ်ယောက်ကို ခင်လိုက်တာ။
တန်ခူး September 18, 2008 at 8:34 PM
သက်ဝေရေ… ဟိုတနေ့ ကထဲက ဖတ်ပြီး ဒီနေ့ တခေါက်လာဖတ်တာ… တကယ်ကို ခံစားရတဲ့ ပို့ စ်လေးပါ… အဝေးမှာရှိနေတဲ့ အဖေ၊အမေတွေဆီ ချက်ချင်းကို ပြန်ပြေးချင်သွားတယ်… မေမေ၀ယ်ပေးထားတဲ့ သပြေပန်းလေးလဲ နေ့ တိုင်းရေလဲပေးလို့အတက်တွေဝေနေတယ်… သက်ဝေရေ… ဘယ်တော့များမှ မိဘတွေနဲ့ ငယ်ကလို ပြန်နေခွင့်ရမလဲနော်…
nu-san September 18, 2008 at 10:23 PM
ဒီစာကို ဖတ်ရင်း ကိုယ်အမေက ကိုယ့်ကို ဆုံးမနေသလိုပဲ၊ ကိုယ့်အဖေက လာပြောပြနေသလို ခံစားရတယ်.. မိဖတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းကို ဒီလိုစကားတွေပဲ ပြောမှာပဲနော်.. ပြောပုံပြောနည်းပဲ ကွာသွားမယ်ထင်ပါရဲ့ အမရယ်.. သူတို့လည်း ကိုယ်တွေကို စိတ်ပူ၊ ကိုယ်တွေကလည်း သူတို့ကို စိတ်ပူပေါ့လေ.. တတ်နိုင်သလောက် သတိရတိုင်း လာဖတ်မယ်နော်.. မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ မရေ...
Yu Wa Yi September 20, 2008 at 9:15 PM
ကျွန်မက သက်ဝေ သက်ဝေနဲ့ လာလာခေါ်နေမိခဲ့တာ ကျွန်မထက်ကြီးနေရင် ဆောရီးပါ
နော်။ မရောက်တာကြာလို့ ဝင်ကြည့်မိတာ..အမှန်တရားလေးတွေနဲ့ တိုးတယ်။ မှန်တယ်မသက်ဝေ….“ ရောက်လေရာအရပ်မှာ သူတော်ကောင်းများ မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေစစ်များနှင့်သာ တွေ့ ကြပါစေ။” ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ 
ကိုတော်တော်လေးပြည့်စုံနေတာ။ ခုခေတ်က သူတော်ကောင်းနဲ့ တွေ့ ရရင်အတော်ကံ
ကောင်းတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီလေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူများအပေါ်ကောင်းနိုင်သူဖြစ်
Taungoo September 22, 2008 at 2:56 PM
မိဘတွေရဲ့ အဝေးမှာရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေအားလုံးအတွက် ရေးထားခဲ့သလိုပါပဲ။ မေတ္တာဓါတ်ထုံမွှမ်းနေတဲ့ပို့စ်အတွက် စာမူခ တစ်ဝကြီး ပေးဖြစ်ပါတယ် အမရေ။ အရင်က မသိလို့ မှားခေါ်ခဲ့မိတာတွေကို ခွင့်လွှတ်ပါအမရယ်။
လူကြီးတွေစုံတုန်း ဘလော့ဂ်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ စာရင်းကောက်သွားတယ်။ အပေါ်က အန်တီကြီးတွေ အားလုံးကို ထည့်ရေထားတယ်နော်။
သက်ဝေ October 23, 2008 at 1:24 PM
မြတ်နိုး စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့စာမရေးလဲ မိဘတွေတိုင်းရဲ့ဆန္ဒတွေ မေတ္တာတွေ အားလုံးက အတူတူပါဘဲ...။
ချိုသင်း... အဲဒီညီအစ်မလေးနှစ်ယောက် ကလဲ ချိုသင်းကို ခင်ပါတယ်တဲ့.. ချိုသင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလဲ မှန်မှန်လာဖတ်ပါတယ်တဲ့...။
တန်ခူးရေ... တစ်နေ့ နေ့ ရောက်ရင်လို့မျှော်လင့်နေတုန်းပါဘဲ...။ ကိုယ်က သူတို့ ရှိရာကို သွားမနေနိုင်ရင် သူတို့ ကို ကိုယ့်ဆီဘဲ ခေါ်ထားရတော့မှာပေါ့...။
နုစံ.... ဟုတ်တယ် တူတူတွေပါဘဲ... Version တွေဘဲ နဲနဲစီကွဲသွားနိုင်ပါတယ်...။ အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်များများ အချိန်နဲနဲရရင်တော့ စာတွေပြန်ရေးပါနော်...။
ယုဝရီ.. ဟီး ညီမလေး ယုဝရီပေါ့နော်...။
အခေါ်အဝေါ်က တအားအရေးမကြီးပါဘူးလေ... ခင်မင်မှုကသာ အဓိကပါ...။
တောင်ငူ... စာမူခအတွက် ကျေးဇူး အထူးအထူး...။ အစုတ်ပလုတ်ကလေး... ကိုယ်တို့ တွေ အသက်ကြီးကြောင်း အခမဲ့ လိုက်လိုက် ကြော်ငြာနေတယ်ပေါ့လေ...။
တစ်ခြား post တွေ သေချာ မဖတ်ရသေးခင် ပထမဆုံး ကျောင်းပြေးတုန်းက သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ link ကနေ ဒီရောက်လာတာ။ ဒီကျတော့ heart ထိသွားတာပေါ့။